Mamely sy mihazakazaka Sabotsy! | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 21, 2006 Sabotsy, Oktobra 21, 2006 Douglas Karr
Nentiko tany amin'ny reniny aho ny zanako vavy androany faran'ny herinandro. Mandehandeha, manodidina ny 2 ora ny fiara. Tokony ho iray kilaometatra teo ho eo ny niverenako tany an-tranoko rehefa nahita ny kamio mpitondra entana kely teo alohako namaky ny fiara teo alohany… ary dia niainga izy! Sady gaga aho no tena tezitra ka niainga nanenjika azy ary niantso tamin'ny telefaona 911. Nandeha fiara 8 kilaometatra avaratra izahay ary hitany fa nanaraka azy aho ary nisintona tamina tobin-dasantsy.
Ny mpamily sy ilay lehilahy niaraka taminy dia nankeo amin'ny varavarankeliko ary nanontany raha manaraka azy ireo aho. Hoy aho… “O, eny”… hoy izy, “Fa, tsy nokapohiko ianao !?”
Tsy nino aho !!! Dia nasaiko nipetraka izy ary teo an-telefaona niaraka tamin'ny polisy aho (efa nanome torolàlana azy ireo aho nandritra ny fotoana rehetra). Somary voakitika kely izy ary nilaza hoe: «Tonga eto aho» ary niditra tao anaty kamio. Hitako ilay lehilahy niaraka taminy nitalaho taminy, fantany fa sahirana izy ireo. Ampahafantariko azy fa eo ivohony aho :).
Ka niverina tao anaty kamio izy ireo ary heveriko fa niverina nanatrika ny lozam-pifamoivoizana izy ireo saingy somary tara loatra iny. Roa kilometatra miala ny arabe no nanakanan'ny polisy ny arabe. Tena henoko ilay polisy nijoro teo an-dalambe nanofahofa azy ary afaka nandre ahy nilaza izy hoe: “Hey… ry zareo ireo!”
Mampalahelo fa zaza nahantra nitondra Mustang vaovao no tratra teo afovoan'izany rehetra izany ary nanisy famantaranandro ny fiaran'ny polisy talohan'ny nanakanana ilay vehivavy (yup, lozam-pifamoivoizana faharoa!). Nisintona aho ary nanome ny mombamomba ahy rehetra.
Taorian'izay dia niverina tany amin'ilay lozam-pifamoivoizana tany am-piandohana izay nahavoa ilay tovovavy mahantra aho. Tena nihontsona izy fa ny fianakaviany nanome ahy fifaliana mahafinaritra hanarahana ny mpamily.
Tsy azoko lazaina aminao ny antony anaovako izany… fa gaga aho fa izaho irery. Mampalahelo fa fanindroany izao no nahitako heloka ary tsy nijery olon-kafa handroso. Tena mahatsiravina izany. Raha nanao zavatra REHETRA ny olona rehetra, dia azoko antoka fa hidina be ny tahan'ny heloka bevava. Olona be dia be no voan'io loza io! Ilay zazavavy mahantra voadona, ilay zaza nidona tamin'ny fiaran'ny polisy, ilay vehivavy niditra am-ponja, ilay sakaizany izay nilaza tamiko fa nilaza taminy izy mba hijanona… sabotsy ho an'ny rehetra izany.
Tsy mila miakatra firy rehefa misy zavatra toa izao. Nisy nilaza tamiko indray mandeha fa mila olona manokana… Tsy ekeko. Tena mpankafy karma aho… raha mijery ny any ivelany ianao, dia misy olona tsy mijery lavitra rehefa ianao no mila vonjy.
Ny lesoka 5 mahafaty amin'ny fitantanana vokatra
Oct 22, 2006 amin'ny 11: 07 AM
Misaotra, Sean… Tsy mahery fo aho, tsy misy mpifehy marketing ... fa tena nahasosotra ahy ny nahita olona iray nandratra olon-kafa ary avy eo niainga. Soa ihany fa tsy naninona ny rehetra, azoko antoka fa mety ho ratsy kokoa ny vokany.
22 Okt 2006 amin'ny 7:59 PM
Doug, hevitra ara-barotra tsara, fa ny tantaran'ny maherifonao dia tena nahasarika sy nilana fahasahiana. Faly be aho fa tsy voatifitra ianao, mipetraka any Cook County, IL aho. Betsaka ny olona tsy miraharaha intsony, faly aho mahalala olona tsy miraharaha.